Ibrahimovic "Ronaldaha dhabta ah kulama kulmayo Talyaaniga waayo hal Ronaldo ayaa jira waana Brazilian"
Mogadishu - 02:24:30
Thursday December 05, 2019 - 22:13:06 in Wararka by Super Admin
Iyadoo la saadaalinayo in ay mar kale soo dhowaatay xilligii uu ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic dib ugu laaban lahaa Horyaalka Serie A-da Talyaaniga ayaa waxaa xidiggii hore ee xulka Sweden uu taageerayaashiisa u sheegay "Waxaan goor dhow isku arki doonnaa Talyaaniga".
Haddaba Wargeyska ‘A Bola’ ee ka soo baxa Bortuqiiska ayaa soo qaatay wareysi uu Ibrahimovic siiyay jaraa’idka ‘GQ’, taasoo uu mar kale ku digtay dhaliyaha kooxda Juventus ee Talyaaniga Cristiano Ronaldo.
Zlatan oo ka jawaabayay inuu Talyaaniga kula kulmi doono Ronaldaha dhabta ah iyo in kale ayaa waxa uu yiri "Ronaldaha dhabta ah kulama kulmi doono Talyaaniga, waa hubaal taasi waayo Ronaldaha dhabta ah waa hal, waana Brazilian".
Sanadkii 2016-kii ayaa Ibrahimovic wareysi uu siiyay ESPN waxa uu ku sharraxay farqiga u dhexeeya Ronaldo de Lima oo reer Brazil ah iyo Cristiano Ronaldo oo reer Portugal ah, waxaana uu yiri "Ronaldo9 waxa uu leeyahay hibo dabiici ah oo saafi ah marka la barbar dhigo Cristiano Ronaldo oo isagu hibadiisa ku keensaday tababar xooggan".
"Luis Nazario de Lima Ronaldo waa midka ugu sarreeya ee aan ku daysado, mana jiro laacib isagoo kale ah" ayuu sii raaciyay Ibrahimovic.
Weli si rasmi ah looma shaacin xilliga uu Ibrahimovic ku soo laabanayo Talyaaniga, iyadoo wararka isboortigu ay la xiriirinayaan inuu ku noqon doono kooxdiisii hore ee Milan.
Ibrahimvic waxa uu u soo ciyaaray kooxo ay ka mid yihiin Inter, Milan iyo Juventus, isagoo ku guuleystay 4 Horyaal oo Talyaaniga ah.